23 Zokusebenza You Need Umxokozelo Ngaphambi Ukuhamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 23 Zokusebenza You Need Umxokozelo Ngaphambi Ukuhamba
Ixesha lokuFunda: 12 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 10/07/2020)
currency appSisanda wabhala blog ku Bamkhwelisa kids kuloliwe ndakunika ezinye iingcebiso ukugcina abantwana bakho ukonwatyiswa. ukufunda iincwadi, ukudlala Nguno nokuphulaphula neencwadi ezishicilelwe emacwecweni nakanjani a kumelwe ukuba umntu, kodwa kukho iitoni zeapps zokukhuphela ngaphambi kokuba uhambe ukuphuma apho sikholelwa ukuba azizukuonwabisa kuphela kodwa ziyakunceda ukuba uzenze uhambo lwakho eziququzelelwe kakhulu and fun! Ukusuka App Store ku Google Play, siye rounded up ezinye best 23 Zokusebenza You Need Umxokozelo Ngaphambi Ukuhamba. Konke okudingayo efowuni yaye ngaphambi uhambo lwakho elandelayo.
Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye wenziwa ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti eeTrayiti abiza ixabiso eliphantsi Emhlabeni.
1. Kuba A Place To Hlala: Airbnb
Nokuba ngokusemthethweni kuloo mzi Sityelele okanye, Airbnb ligama indlu. Oku ngokuqinisekileyo omnye zokusebenza kufuneka umxokozelo phambi kokuba ahambe. Linikeza app kude amaxabiso zitshiphu, kunye namava yokwenene ngakumbi ngokuvumela abasebenzisi kuhlala lendawo, okanye kwikhaya labo. Le app enikeza esibizwa Uhambo, nelinika Amava ukuba bakhethe ngethuba ukuhlala. Siqinisekile ukuba uya kuba elide de inika yonke into oyidingayo go enye, kodwa ngoku, ongakhetha ukuba sinikele impela uzilayishe ezantsi.
Dijon ukuya eParis ngololiwe
Ukubuyela eParis ngololiwe
Lille ukuya eParis ngololiwe
2. IiSoftware ekufuneka Uyikhuphele ngaphambi kokuba uhambe kwiGumbi lokuGqibela leMizuzu: Hotel Tonight
Inyaniso kukuba ngamanye amaxesha Airbnb wakho uya kuwa nge. Yiloo nto ke Icala elisezantsi kuphela app. Kodwa ukuba bangakhathazeki, ungakwazi isicwangciso B. Hotel Tonight yinkonzo enokuthenjwa eziphila on-ngomzuzu wokugqibela kuyo. Amaqabane Inkampani neehotele ukuba banikele ngezaphulelo amagumbi engenanto, yaye uya kukwazi babhukishe elinye ngaphantsi 10 imizuzwana. Wena uthole 24/7 inkonzo yabathengi evela kwiqela Hotel Tonight, xa kukho into engahambi ziyeka.
I-Linz ukuya eSalzburg ngololiwe
Ukhenketho oluya eParis ngololiwe
3. IiVidiyo zokuKhuphela ngaphambi kokuHamba kwiiNdawo zokuHambisa eziHambisayo kwangaphambili: hopper
Bese i sendiza ihotele app ukuba uyafumana wena amaxabiso kakhulu yezohambo. It ihlaziya data ukulandelela amaxabiso aqikelele amaxesha engambi kumagumbi bucala kunye nencwadi moya. Ngokutsho website yayo, luyagwagwisa a 95% izinga lempumelelo uqikelele ubhukisho ukuya kusasele unyaka. Akukubanga!
4. IiNkqubo ekufuneka uzikhuphele ngaphambi kokuThelekisa amaXabiso okuHamba: Kayak
Ngoxa Sele got a apps ezimbalwa apha kwizicwangciso zokuhlala nezokuhamba, Kayak uhlelo zonke-in-nye enceda amaxabiso ukuthelekisa phakathi iinjini ezahlukeneyo search zonke iimfuno zakho zokuhamba. Oku kubandakanya iihotele, moya, imoto, kwaye nkqu iiphakheji zokuhamba. Thatha ithuba lezixa ezikhulu zokuthelekisa ukubhukisha lonke uhambo oluya kuludinga kwindawo enye.
IMunich ukuya kwiSalzburg ngololiwe
ILondon ukuya eLyon ngololiwe
5. IiSoftware ekufuneka uzikhuphele ngaphambi kokuHamba ngeeTikiti zeTreyini: Gcina A Isitimela
Ukuba uhamba kulo lonke elaseYurophu, kukho ithuba elihle uya kuba usenza indlela yakho ngololiwe. Ukuhanjiwa kawonke-wonke iinketho eYurophu lalidume zabo amakhonkco cross-lizwe, kwaye ngeli lixa iindiza ezikawulezayo, oololiwe isebenze, ngamaxesha amaninzi, kunye nenkonzo Zingaphi iindlela ezininzi. Xa kunokwenzeka ukuba uqubha imfuno amatikiti etreyini, ukulanda Gcina A Isitimela app ukwenza okuthenga cheap kwaye kulula.
ENuremberg ukuya eMunich ngololiwe
6. IiNkqubo zokuKhuphela ngaphambi kokuHamba ngokuZonwabisa kwiGo: Netflix
Ngoku sonke siyazi into Netflix na. Ukuba awazi, Samkela kwihlabathi elitsha lonke! Sayina wokunilinga free, download zonke ibonisa ozithandayo okanye iimovie wati kubo ngoxa kuloliwe, ngaphandle kwesidingo WiFi! Khumbula ukuba ubonisa ezahlukeneyo ziyafumaneka ngokwentando kuwe Sityelele oko ilizwe, ke ukuba nawe ngokupheleleyo ngamakhoboka kwenye, Qinisekisa ukulayisha njengoko ngeziqendu ezininzi kangangoko kunokwenzeka phambi kokuba uwele umda!
IAmsterdam yaya eLondon ngololiwe
Rotterdam ukuya eLondon ngololiwe
7. Ukuze Sasazaa Iindleko Benu Friends: Splittr
Uhamba nabahlobo? Kakhulu! Enye yeendlela elula yezinto ukuba nzima kuba ukuba ngaba ukwahlula imali yakho zokuhamba ngokuchanekileyo. Ziphephe ungquzulwano kwaye usebenzise cell phone yakho iindleko ngokulula yahlula phakathi abahlobo. Ukuba une iqela, le yenye zokusebenza kufuneka umxokozelo ngaphambi kokuya. Splittr lenzelwa ukuba abantu abahambele. Faka iindleko on the go, kuquka ngubani wahlawula ntoni kwaye app uya kusincedisa.
Ukutyelela amazwe ahlukeneyo kunye zemali ezahlukeneyo? Akukho ngxaki. Zonke iimali ziyaxhaswa yaye uyakwazi mix imali ngaphandle kokuba ukwenza ngokwakho ukuguqulwa lwemali.
IAmsterdam ukuya eBerlin ngemvula
I-Leipzig ukuya eBerlin ngololiwe
Ukuhamba ngendlela eya eBerlin ngololiwe
8. Ukuze ukwazi indlela To Tip: Globe Tips
Nangona le app ifumaneka kuphela iOS, GlobeTips sisixhobo emangalisayo uncedo abo bedidekile wumbe ngamazwe. Oku kubaluleke kakhulu kubahambi ababeqhele ukuhamba uqoqosho olusekelwe kuncedo abalwayo ngelixa bekwamanye amazwe. Enoba eFransi okanye Spain, thatha ithuba kwiGlobeTips ukuze ufunde ukuba yimalini ukucebisa bonke ubugcisa.
Nuremberg ukuya eStuttgart ngololiwe
IMunich ukuya eStuttgart ngololiwe
IFrankfurt ukuya eStuttgart ngololiwe
Heidelberg ukuya eStuttgart ngololiwe
9. To kuphole Out: Yehlisa
Ukuba umhambi luvo, Enye yeZinto eziSebenzayo ekufuneka uZikhuphele ngaphambi kokuba uhambe yiCalm, sisixhobo esiya kuba ngumhlobo wakho osenyongweni. Esi sixhobo travel lokuposa iye imithwalo ngeengcamango ezahlukeneyo lungxunguphalo, self-akuve, zokuphefumla ngaphezulu. Kwakhona unikeza eliphantsi izandi unokukunceda uphumle kamnandi. Njengoko a kandziyise ngaphandle umhambi ngokwam, Yehlisa undinceda ukugcina yam, kuhle, kuzolile endleleni.
I-Paris ukuya eStrasbourg ngololiwe
ILuxembourg ukuya eStrasbourg ngololiwe
Nancy ukuya eStrasbourg ngololiwe
Dijon ukuya eStrasbourg ngololiwe
10. To Keep Iinkumbulo zakho: Live trekker
Ukubhala kwingxelo yemihla ngemihla i-school ubudala awesome. Kodwa ke nantoni ephepheni kuthetha uzibeka esichengeni ukulahlekelwa, ingakumbi wena xa uhambele amazwe ezininzi. Enye yeendlela zokusebenza zokukhuphela ngaphambi kokuhamba i-livetrekker.com. Journal uhambo ukuze unokukhangela ngasemva uhambo lwakho kwi imaphu esebenzisanayo. Le app tracks njengoko uhamba, uphawu umgca obomvu kunye imephu kwi indlela ngqo uthatha; le app ihlola isantya yakho nokuphakama, ngokwenza amkhulisa zabahambi adventure. Yongeza imifanekiso, ividiyo, audio and umbhalo endleleni, ngokudala idayari umdla multimedia ungabelana! free, iOS and Android, livetrekker.com
Rimini ukuya eMilan ngololiwe
IRoma ukuya eMilan ngololiwe
UVerona ukuya eMilan ngololiwe
11. To Keep Yourself Organised: PackPoint
Yinto mhlawumbi nje yimincili yokuya phezu adventure, kodwa kukho njalo into siyalibala ukwenza okanye apakishe phambi kokuba uhambo. Ngethamsanqa nobugcisa apha kwakhona ukugcina ngosuku. download PackPoint! Kuqwalaselwa imozulu imihla neendawo uhambo lwakho. Kwakhona uya kukucela ukuba ukhethe imisebenzi ukuze inxaxheba ngethuba uhambo lwakho, ezifana kwintlanganiso ishishini, a ukuqubha echibini, okanye isidlo izibiliboco. Emva koko ke uya kunikela uluhlu ukupakisha izinto kufuneka izakuzisa esekelwe le misebenzi. Snazzy, kunene? Usenokwabelana nabahlobo bakho ngento oyifumeneyo, ukwenza ziya lula, kakhulu! ngoko ke khumbula oku incam ezibalulekileyo zokusebenza kufuneka umxokozelo ngaphambi kokuya.
IBerlin iye eAmsterdam ngololiwe
12. Kuba Advice On Imisebenzi: IngcebisoEzintathu
IngcebiwoEzintathu is a lokusebenza super ukuba unokukunika izigidi reviews nje malunga nantoni, ngendlela elula! Iqela elingcono malunga nayo kukuba ncomo, imibono, videos, neefoto zivela kubantu REAL, ngoko uyazi ukuba kusemthethweni! Zama umsebenzi we-TripAdvisor's Near Me ukufumana iindawo eziphononongwe kakuhle kufutshane, kodwa osemqoka ilungileyo le app kufuneka anikele linani amazwe ixhasa - ukuba nje ngayo yonke, okwenza isikhokelo kuyimfuneko ukuba wonke umhambi. Usenakho nokucela imibuzo umdla ethile kwiiforam app okanye ukongeza ncomo wakho ngendlela efanayo uncedo.
Cologne ukuya eFrankfurt ngololiwe
UMunich ukuya eFrankfurt ngololiwe
Hanover ukuya eFrankfurt ngololiwe
13. Ukuze Funda Ukuze Thetha Like A Local: Duolingo
Nangona ethetha ngokucothayo ngezandla phezu-ebaxiweyo isandla kubonakala fun, ngamanye amaxesha kungaba ukufumana olwasishiya kancinane. Faka Duolingo. Ukuba sizimisele malunga ngokubandakanyeka ngokutyeziswa, ukulanda le app!
It inika izifundo-labaqalayo, kuphela, kodwa sisixhobo enkulu labo abakufunayo ukuhlamba phezulu kwiilwimi ezahlukeneyo. Unako kwakhona ungaxoxa bot select iilwimi. Oku kunokuba luncedo ngakumbi xa uzama ukufunda amabinzana onokuthi uwasebenzise aphesheya.
IAmsterdam yaya eBrussels ngololiwe
14. Ukuze Onokukufumanisa Ngayo Oko xa bethetha: Google Translate App
Ngoxa Sele kucetyiswa Duolingo, xa uqubha ixesha-kwemali kunye abafuna ukunxibelelana okwixesha-lokwenene, Google Translate le app ukuba ukusetyenziswa. Zibonisa ukuqondwa kwelizwi kwaye ngokusisiseko ulwimi zonke basemzini onokuze ekuhlangabezaneni, ekwenzeni le omnye apps translation engcono phakathi. Yinto ethandeka nokuba umelwe kukuba i Android okanye iPhone, sesikhona offline ezisebenzisekayo.
IBerlin iye eDresden ngololiwe
Ukuhamba ngeenyawo ukuya eDresden ngololiwe
IPotsdam ukuya eDresden ngololiwe
Nuremberg ukuya eDresden ngololiwe
15. Ukuze Nabahlobo New: Dibana
Ukuba uhlobo umhambi othanda ukwenza abahlobo abatsha xa useluhambeni, babheke phambili. Meetup uhlelo simiselwe ukukunceda odibana-nye abantu bonke kwihlabathi jikelele. Unako ukwenza amaqela anomdla-based, kwaye ukudala imicimbi efana bha igaqa kunye nokutya kunye balapha. Le app Ude isicwangciso iintsapho ukuba zithathe inxaxheba kwimisebenzi kid-friendly. Intle!
ENuremberg ukuya ePrague ngololiwe
IBerlin iye ePrague ngololiwe
16. Ukuhambahamba Xa ufika: Linganisa
Nangona siza kusoloko sincoma usebenzisa uloliwe endaweni imoto xa useluhambeni, Ukuba uzufumana urholela ukufika emva kwexesha ebusuku okanye isihloko ethile ngaphandle inkonzo kuza kufuneka ukuba usebenzise Linganisa. Nangona zonke lizwe eyaziwayo okanye US competitor yayo Lyft, phantse kuwo onke amazwe kukho app iteksi ethile uhlobo. Enoba ku Kazakhstan okanye France, fumana usetyenziso lwakho lweteksi kwaye uqiniseke ngokukhuphela ngaphambi kokutsiba kuloliwe.
UMunich ukuya eZurich ngololiwe
Berlin ukuya eZurich ngololiwe
I-Basel ukuya eZurich ngololiwe
Vienna ukuya eZurich ngololiwe
17. To Khangela Abo osuka Streets: Google Maps App
Wakuba makaveze bamfumana ngokwakho ebhadula ezitratweni befuna ukuba Baguette best, kuza kufuneka Maps Google ukuba ukujikeleza. Ngoba? Ngenxa Maps Google ngomnye best Access apps zehlabathi. Ukususela ndlela zokuhamba ukuba iishedyuli uloliwe, Google iye wawuzegquma. Kanangcono, uyakwazi download iimephu zokusetyenziswa kweintanethi, Oko kuthetha ukuba kwiindawo ezinendawo enemibala ye-WiFi usenokuyifumana le bistro ifihliweyo ezantsi kwendlela.
Ukuze umxokozelo iimaphu, intloko nje Maps Google kwi smart kunye Lawulela kwimaphu ongathanda ukusebenzisa. Wakuba kugxile kwiindawo ozifunayo, ubhale “iimephu Kulungile” kwi bar yokukhangela. Google baya kuqala ukukhuphela iimephu offline kwifowuni yakho ukuba zisetyenziswe ngalo naliphi na ixesha. Yiyo leyo!
La Rochelle ukuya eNantes ngololiwe
Toulouse ukuya eLa Rochelle ngololiwe
IBordeaux ukuya eLa Rochelle ngololiwe
I-Paris ukuya eLa Rochelle ngololiwe
18. IiVideos zokuKhuphela ukuKhangela uhambo lwakho: TripIt
TripIt lokusebenza yokulandelela ukuhamba kunceda uhlele iinkcukacha zakho kwi ndawo enye. Ukususela ukubhukisha zibalekele ubhukisho ehotele, TripIt ngokucwangcisa yonke into ibe lula-to-funda hambo oqhubeka track. Noba akhawunti zakho ngqo le app, okanye phambili isiqinisekiso email yakho, kunye TripIt uya kusincedisa. Ifumaneka kwi desktop, Android okanye Apple iPhone, uya kuba nakho ukuyisebenzisa naphi na emhlabeni.
IGenoa ukuya eVenice ngololiwe
Turin ukuya eVenice ngololiwe
Parma ukuya eVenice ngololiwe
ILa Spezia yaya eVenice ngololiwe
19. To Know Your Currency Exchange Rate: Lwemali App yi Gcina A Isitimela
Nangona eli namnye oya niche kancinci, kukho amaxesha amaninzi Ndakhe ndaya endleleni ngaphandle data okanye WiFi kwaye wayebila ukwazi izinga lotshintshiselwano. Nokuba umqhubi weteksi enomthunzi okanye ukhenketho ofuna uhlawula imali, ukuba i app kwi ngesandla ukuba enze ngathi currency converter inokuba oyinto. Gcina A Isitimela currency app imisebenzi ngomhla okanye intanethi ngoko kusoloko iyafumaneka xa uyifuna.
I-Basel yokuThunyelwa ngololiwe
Bern ukuya kuDityaniswa ngololiwe
I-Lucerne yokuThunyelwa ngololiwe
I-Zurich yokuThunyelwa ngololiwe
20. Ngokuba konke: WhatsApp
Ukuba ngaba sele na le app efowunini yakho, Yifumane. Nangona Intshona Melika iye becala babengekho app data-based yeselula, Whatsapp wonke uyisebenzise kwemiyalezo, wevidiyo ubiza ngezwi. yokuthandwa kwayo zenza ukuba amashishini abaninzi aphesheya asebenza kunye nenani kuWhatsApp ukongeza okanye endaweni inombolo yefowuni ibhanile. Sithembe xa sisithi uyakufuna ukukhuphela i-WhatsApp.
UFlorence ukuya eAzerzo ngololiwe
I-Perugia ukuya e-Arezzo ngololiwe
I-Bologna ukuya e-Arezzo ngololiwe
Siena ukuya e-Aszzo Uloliwe
21. Iiapps ekufuneka uzikhuphele ngaphambi kokuba uhambe kwiindiza zakho: LoungeBuddy
Nangona oko akusoloko asiyongcamango ilungileyo ukubhabha, ikakhulu ngaphakathi Europe, maxa wambi uya kufuneka ukubamba flight intloko apho oololiwe abakwazi ukuya. Ukuba ngaba ziphelela kwi-moya, yenza wena ube umusa umxokozelo LoungeBuddy, a app travel ziluncedo ikuvumela ukuba uthenge ufikelelo ngesaphulelo ukuba amagumbi okuphumla kwisikhululo. Oku kuluncedo ingakumbi ezo layovers elide, njengoko amagumbi okuphumla moya zinika ukutya free kunye neziselo. okubaluleke, benza zokusabela umsindo befuna amaninzi zifumaneka ezinjengeetheminali kwisikhululo ukuze ifika yakho elandelayo kuya kuba mnandi kakhulu.
IBerlin yaya eAachen ngololiwe
UFrankfurt ukuya eCologne ngololiwe
Dresden ukuya eCologne ngololiwe
I-Aachen ukuya eCologne ngololiwe
22. Kuba North America EYurophu: Metric Conversion App
Nangona abanye ungathanda ukuba yintlekisa North America kunye nokubambelela yazo yinqobo kwinkqubo ombuso isikali, isenokwenza sizathu enkulu inkxalabo xa amabombo phesheya. Indlela ekhawuleza ngayo asithoba km ngeyure? Ingaba kwekilogram pasta uzihlaziye? Ingaba yonke le mibuzo ngaphandle ujonge egezayo ngokukhuphela le app Metric Conversion kwifowuni yakho phambi kokuba uqalise uhambo lwakho okanye usebenzisa i Gcina A Train app elingana ziyafumaneka kwicandelo apps yethu Gcina A Isitimela Blog.
IBerlin iya eRothenburg Ob Der Tauber ngololiwe
Stuttgart ukuya eRothenburg Ob Der Tauber ngololiwe
UMunich ukuya eRothenburg Ob Der Tauber ngololiwe
IFrankfurt iye eRothenburg Ob Der Tauber ngololiwe
23. Ukuze Faka I US: Mobile Passport App
Le app Urhulumente ezisemthethweni kuphela abakolu luhlu, Mobile Passport ivela US Customs and Protection Umda ukuba abahambi uncedo kungena US ngokulula. Download phambi ufika e-United States kwaye usebenzise ukuba ugcwalise iinkcukacha zakho kwi-cell phone yakho. ke, angenise ifomu yakho emva kwakho bachukumise phantsi uze utsibe umgca omkhulu zibuke ongenelelo kwi-US. Ku simahla kwaye kulula ukuyisebenzisa!
I-Bremen ukuya eNuremberg ngololiwe
I-Leipzig ukuya eNuremberg ngololiwe
Ukuhamba ngeenyawo ukuya eNuremberg ngololiwe
IHamburg ukuya eNuremberg ngololiwe
Luluhlu lwethu lweenkqubo ezilungileyo zokukhuphela ngaphambi kokuhamba, nokuba kukwhambo olude lukaloliwe okanye uhambo nje lwendawo. Ukuba ufuna naluphi na uncedo ngakumbi zohambo lakho, Gcina A Isitimela inikeza kuqeqeshwe amatikiti ngamazinga ezingabizi, ukukhulula ibhajethi yakho imisebenzi mnandi xa ufika khona kwakho!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fapps-download-traveling%2F- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Iiapps longtrainjourneys train Travel uhambo ngololiwe Travel traveltips